Ningayihlokolozi i-ANC ngoba ngeke nilunge, kusho uMntwana wakwaPhindangene | isiZulu
Ningayihlokolozi i-ANC ngoba ngeke nilunge, kusho uMntwana wakwaPhindangene
UButhelezi noMazibuko okhethweni
UButhelezi ugxeke i-ANC ne-NFP
UButhelezi akazinuke yena amakhwapha - ANC
Durban - UMengameli wenhlangano i-IFP, uMangosuthu Buthelezi, ukhathazekile ngezenzo ezenziwa amaqembu aphikisayo zokuhlokoloza i-ANC njengoba esabela ukuthi lokhu kungase kuholele ekutheni kuchitheke igazi.
Lo mholi uveze ukukhathazeka kwakhe ngesikhathi ezwakalisa uvo lwakhe mayelana nezinguquko ezenziwe nguMengameli wezwe uJacob Zuma ngesikhathi eguqula iKhabinethi.
UButhelezi unxuse amanye amaqembu ukuba agawule abheke uma ehlokoloza i-ANC, amaphaphu anganyuki kakhulu, njengoba kwenzekile ngesikhathi benomhlangano njengamaqembu aphikisayo ngoMsombuluko ekuseni eGoli.
OLUNYE UDABA:UButhelezi uthi akusolwe i-ANC ngokuntuleka kwemisebenzi
Ekhuluma nabezindaba ngoMsombuluko ntambama, uButhelezi uveze ukuthi iqembu lakhe libe yingxenye yalo mhlangano ngenhloso yokuqinisekisa ushintsho olunokuthula.
“Sikholwa wukuthi uMengameli uhlulekile ukuphatha iNingizimu Afrika kanti futhi siyazi ukuthi kumele kuthathwe izinyathelo ezinqala ukugwema umonakalo omkhulu,” kusho uButhelezi.
Uqhubeke wathi iqembu lakhe liyaseseka isicelo esenziwe yi-EFF kanye ne-DA ukuthi kunxuswe uSomlomo uBaleka Mbete ukuba iPhalamende lihlale ngokushesha ukuze kubanjwe inkulumompikiswano yokungamethembi umengameli, kubika iSowetan.
“Sasishilo phambilini futhi sonke siyazi ukuthi le mizamo ayizukubanampumelelo uma amalungu e-ANC engavoti ngonembeza wawo,” kuqhubeka yena.